Maqaal;Shirarka Ururka Jaamacadda Carabto Go’aamo Aan Fulin Laheyn Muddo 70 Sanadood ah. – Calamada.com
Maqaal;Shirarka Ururka Jaamacadda Carabto Go’aamo Aan Fulin Laheyn Muddo 70 Sanadood ah.
calamada July 27, 2016 3 min read
Dawaaqidda carbeed ayaa halku dhigga shirka ka dhigtay “Al-amalâ€ oo macnaheedu yahay Rejo ama yididiillo.
Â Taariikha Shirarka Ururka Jamaacada Carabta iyo goâ€™aamada aan la fulin ee kasoo baxay.
waxaana looga hadlayay hindise ahaa mideynta ciidamada dowladaha Carabta wuxuuna ahaa ajandaha kaliya ee dhaxalgalka ahaa balse nasiib darro lama fulin goâ€™aankaasi oo hoggaamiyaasha carabta waxay ku mashquuleen cabidda casiirka iyo ku takri fallidda hantida dadweynaha.
1-Heshiis lalama geli karo israaâ€™iil
2-lama aqoonsan karo Israaâ€™iil
3-lalama hadli karo Israaâ€™iil.
waxaa looga hadlayay ajandde uu soo agaasimay boqorkii Sacuudiga oo ahaa “dadaallada nabaddaÂ carabta.
balse goâ€™aankaasi waxba kama hirgelin oo 19 March ee isla sanadkaasi Mareykanka ayaa duullaan ku qaaday Ciraaq isagoona qabsaday wadanka oo idil.
Sanaddii 2013 waxaa shirka lagu qabtay Magaalada Dooxa ee wadanka Qadar waxaana lagu aqoonsaday in la aqoonsado waxa loogu yeero golaha Qaranka suuriya oo kooxaha mucaaradka ah leeyihiin, Hoggaamiyaasha dowladaha carabta ayaa xilligaasi kursiga Suuriya siiyay mucaaradka Suuriya balse laba sana kadib waxba kama fulintii goâ€™aamadii dooxa.
Hoos Ka Daawo Warbixin Muuqaal ah oo ku saabsan shirarka Jamaacadda Carabta.
Previous: Gaari Dagaal Oo Ciidamada Kenya Looga Gubay Lamu.
Next: Dagaal Culus Iyo Duqeyn Ka Dhacday Duleedka Magaalada Muqdisho.